MMU ရောက်ကြယ်စင်လေးများရဲ့ အနာဂတ် ~ MSU Portal
စာဖတ်သူတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်(MMU) ကိုသိကောင်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေထဲက လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုပါ။ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ သဘောင်္သားအရာရှိဖြစ်ချင်သူတွေ- အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လိုသူတွေ-ဆေးကျောင်းမတက်ချင်သူတွေ အတွက် ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ဟာ ဆယ်တန်းကိုအမှတ်မြင့်မြင့်နဲ့ အောင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတက္ကသိုလ်ဆိုပါတော့။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆယ်တန်းကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ပြီး ဆေးကျောင်းမတက်ချင်လို့ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ရောက်လာသူတစ်ဦးဆိုတာ ဝန်ခံပါရစေ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်အလာအရ ဆယ်တန်းကို ၅-၆ ဘာသာနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ဟာ သူဝါသနာပါတဲ့ ပညာရပ်ကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အလွန်နည်းပါတယ်။ ၅-၆ဘာသာနဲ့ဆယ်တန်းကို အောင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာစာဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်သင်ယူချင်ပါတယ်ဆိုရင် မိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမှ ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး။ စာရေးသူလည်း ငယ်ငယ်က ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ဆယ်တန်းရဲ့ရမှတ်တွေကြောင့် မိဘတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကိုမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘဲ ဆေးပညာကိုဝါသနာမပါလို့ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ ကဲထားပါတော့ လိုရင်းကိုသွားကြတာပေါ့။ စာရေးသူပြောချင်တာက ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းပါ။ အပြင်လောကမှာတော့ MMU မှကျောင်းပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်အကိုင်အနာဂတ်က အလွန်သေချာတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတာကြားမိသလိုပါဘဲ။ MMU ဟာခုဆိုရင် ဆယ်စုနှစ် ၁ခုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျောင်းတော်ကြီးမှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း မကြာခင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လူအား-ညာဏ်အား-ငွေအား တွေနဲ့ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းတော်ကြီးမှပေးအပ်မဲ့ တန်ဖိုးကြီး ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျောင်းတော်ကပေးအပ်တဲ့ဘွဲ့ရတော့မယ်ဆိုရင် မည်သူမဆိုပျော်ရွှင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ မပျော်နိုင်ပါဘူး…. ဘာကြောင့်လည်း? MMUကဘွဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ဟာ စာရေးသူ(MMUကျောင်းသားအားလုံး) အတွက် အပြင်လက်တွေ့အလုပ်ခွင်အတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါ။ MMU မှကျောင်းမှာ ဘာသာရပ်မျိုးစုံ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမျိုးစုံ အတွက် majorမျိုးစုံရှိပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပေါများဆုံးလို့ဆိုရမယ့် NS&ME နှစ်ခုထဲက NSကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျောင်းပညာသင်နှစ် ၄နှစ်- သဘောင်္ပေါ်မှာ ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် ၁ နှစ်ပြီးလို့ မကြာခင်ဘွဲ့ရတော့မယ့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်။ ပုံမှန်အားဖြင့်(အရင်က) ဘွဲ့ရပြီးတာနဲ့ THIRD CLASS (2ND MATE) စာမေးပွဲဖြေ၊ အောင်ရင် သဘောင်္ကို အရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ်တက်၊ လစာတွေသိန်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြောင်းလဲနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ရေးအချိန်ကာလမှာ စာရေးသူနဲ့ MMUကျောင်းသားအားလုံးအတွက်တော့ အနာဂတ်က ပိုပြီးဝေဝါးလာခဲ့ရပါပြီ။ ကျောင်းသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဟာ ခက်ခဲပြီးရင်း ခက်ခဲလာပါပြီ။ MMUမှ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေမနည်းတော့ပါဘူး…။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာ သဘောင်္လိုက်တဲ့ကျောင်းသား senior တစ်ချို့သာ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပြီး သဘောင်္မတက်ချင်တဲ့ သူအများစုကတော့ အလုပ်အကိုင်ရှာဆဲ-တစ်ချို့က သင်ထားတဲ့ပညာရပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ကြုံရာအလုပ်ကို မလုပ်ချင်ဘဲလုပ်နေကြတာတွေ့ရမှာပါ။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းအများစု အပြင်လောကမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှာနေဆဲမှာ ကျောင်းတော်ကြီးကတော့ ကျောင်းသားသစ်တွေ မူလထက်ပိုခေါ်-ပညာသင်နှစ်ကို တောင် ၁နှစ်တိုးပြီးဆက်လက် ချီတက်နေပါတယ်။ MMU မှကျောင်းဆင်း ENGINEEER တွေကို ဘယ်COMPANYကများ ယုံကြည်ပြီးအလုပ်ပေးပါသလဲ? BE ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုင်ထားပေမယ့် ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့တန်တဲ့အရည်အချင်း မရှိတော့ companyတွေက အလုပ်မပေးတာ ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး။ ဘာကြောင့် စာရေးသူတို့ကျောင်းဆင်းတွေ အရည်အချင်းမပြည့်တာလဲ? ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ရည်မမှီလို့လား- မကြိုးစားလို့လား- လမ်းမှားရောက်သွားလို့လား။ တစ်ချို့သောသူတွေဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အများစုကတော့ မဟုတ်ပါဘူး.။ ကျောင်းသားအများစုဟာ ဉာဏ်ရည်ထက်ပြီး ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသူတွေပါ..။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခက်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ပြီးရောက်လာသူတွေပါ။ MMUရောက်မှ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားချင်လျက် ပုံမှန်အောက် နိမ့်ကျလာတာများပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? စာရေးသူအမြင်မှာတော့ MMUရဲ့ ပညာရေးကြောင့်ပါ။ ဘယ်လောက်အရည်အသွေးကောင်းပြီးထက်တဲ့ဓားဖြစ်ပါစေ မကောင်းတဲ့ဓားသွေးကျောက်မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာသွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဓားက အနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးသွားမှာအမှန်ပါ။ MMUမှကျောင်းသား အများစုဟာလည်း အထက်ကအတိုင်းပါဘဲ..။ မူလက ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပေမယ့် စနစ်ရဲ့အောက်မှာ ဒူးထောက်ခဲ့ရတာများပါတယ်။ ဒါတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေမသိတာလား- သိလျက်နဲ့ မျက်ကွယ်ပြုထားတာလား? အရင်က သဘောင်္သားလုပ်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ချို့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ချို့ရှိပေမယ့် ခုတော့ စနစ်သစ်ရဲ့အောက်မှာ အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာလည်း ဝေဝါးလာပါပြီ။ စာရေးသူဟာ DECK အရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ် ပင်လယ်ပြင်ကို ပျံသန်းမယ်လို့အရင်က ရည်မှန်းခဲ့ဘူးပေမယ့် ခုတော့အားအင်တွေကုန်ခန်း-ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်ဆုံးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိတော့သလိုဘဲ..။စနစ်ဟောင်းတုန်းက ဘွဲ့ရပြီးတာနဲ့ အရာရှိစာမေးပွဲကို တိုက်ရိုက်ဖြေခွင့်ရှိတယ်.. ကိုယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလို အရာရှိတစ်ယောက်အမြန်ဖြစ်နိုင်တယ်..။ ခုစနစ်သစ်မှာ MMUကျောင်းဆင်းအားလုံး စာမေးပွဲကို တိုက်ရိုက်ဖြေခွင့်မရှိတော့ဘူး..။ ကျောင်းသားတွေအတွက် လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ သင်တန်းကြေး-၂၈သိန်း၊ အချိန်ကာလ ၇လ ကို DECK officer ဖြစ်လိုပါက မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမယ်။ စာရေးသူတို့ DECK officer ဖြစ်လိုသူတွေသာမက သဘောင်္ENGINEER ဖြစ်လိုတဲ့ကျောင်းဆင်း MEကျောင်းသားတွေလည်း စနစ်သစ်ရဲ့လက်အောက်မှာ အနာဂတ်ဝေဝါးလျက်ပါဘဲ။ အခြားသော မေဂျာမှ ကျောင်းပြီးသောသူများ-သဘောင်္မက်လိုသူတွေရဲ့ အနာဂတ်ဝေဝါးယုံမဟုတ်ပါ ဘူး လမ်းစပါပျောက်နေသလိုပါဘဲ.။ ကျောင်းပြီးသွားတာကြာပြီ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု ကိုင်ပြီး နေရာပေါင်းစုံကို အလုပ်များရမလားလို့ တောင်းပန်ခရအလုပ်တောင်းရင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်နဲ့အသက်ဆက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း-Senior ကျောင်းသားဟောင်းတွေကို တွေ့တိုင်း စာရေးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာအမှန်ပါ။ သဘောင်္လိုက်တဲ့ သူတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း အားရစရာ နတ္ထိပါဘဲ။ ခုချိန်မှာ သဘောင်္သားဖြစ်ချင်လိုသူမှန်သမျှ ဖြစ်ခွင့်ရနေလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘောင်္သားတွေပိုလျှံနေချိန်- ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝမ်း သဘောင်္လောက ဆုတ်ယုတ်လာချိန်မှာ စာရေးသူတို့ MMUကျောင်းဆင်းတွေအတွက် ပိုပြီးခက်ခဲ့လာခဲ့တာအမှန်ပါ။ ကျောင်းမှပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်၁နှစ် ရယူဖို့တောင် အင်မတန်ခက်ခဲလာပါပြီ။ စာရေးသူနဲ့ ကျောင်းသားတစ်ချို့က scholarအမည်ခံထားတဲ့ စာချုပ်တွေနဲ့ ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်ရယူပြီးပြန်လာချိန်မှာ တစ်ချို့သောကျောင်းသားတွေက တော့ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတွေထက် ထီးဖြူ၊ဖိနပ်ပါးတဲ့အထိ company တစ်ခုပြီးတစ်ခု သဘောင်္များရမလားလို့ ပြေးလွှားနေတုန်းပါဘဲ။ တစ်ချို့သောသူတွေက company တွေကို ရိုက်ကြေး သိန်း၂၀-၃၀ ပေးပြီး ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်ယူဖို့ ထွက်သွားကြလေရဲ့…။ စာရေးသူပြောချင်တာကတော့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ သဘောင်္သားဖြစ်ချင်လို့ ရေကြောင်းတက်မဲ့သူတွေများပါနေရင် သတိနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ပါ။ MMU တက်မယ်ဆိုရင် ၅နှစ်-၆နှစ် အချိန်ကုန်မယ်- ပိုက်ဆံကုန်မယ် …ပိုဆိုးတာက ကျောင်းတက်ရင်း စိတ်ဓာတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ သဘောင်္သားလုပ်ချင်ရင် MMMC(သို့) အပြင်ကနေ ဝင်တာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ engineer ဖြစ်ချင်သူတွေလည်း သေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်..။စာရေးသူအမြင်ကို ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခုချိန်မှာ တိုးတက်မှုလမ်းကို လျောက်လမ်းနေတဲ့အချိန်ပါ..။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို ငွေကြေးတစ်ခုထဲကြည့်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ထဲကို မထွက်စေချင်ပါဘူး။ တို့နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ အနာဂတ် လူငယ်တွေကို မြင်တွေ့ချင်ပါတယ်။ တော်တဲ့သူတွေ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ ဒုက္ခတွေနဲ့ဖြတ်သန်းမဲ့အစား ကုန်းပေါ်မှာဘဲ နိုင်ငံအတွက်-မိမိနဲ့မိသားစုအတွက် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိဘများအနေဖြင့်လည်း ဟောင်းနွမ်းတဲ့အယူအဆတွေကို စွန့်လွတ်ပြီး ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ အားသန်တဲ့လမ်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုစေချင်ကြောင်း …………